VAOVAO: MIVADIKA NY RASA ! - rov@higa
VAOVAO: MIVADIKA NY RASA !
15 Septembre 2011, 23:12pm
Tondrozotra Najabak’i Salomao ny FAT
Niteraka adihevitra izay nifandritaritana hatramin’ny 17 jona 2011 no ho mankaty ny amin’ilay fanitsiana natao tamin’ny sori-dalana heverina hitantanana ny tetezamita.
Mazava ankehitriny ny resaka fa diso ary fandaniam-potoana sy fampisavorovoroana ny sain’ny Malagasy fotsiny ilay taratasy nambara fa avy amin’ny Sekretera mpanatanteraky ny SADC, Dr Tomaz Salomao, tamin’ny 17 jona mirakitra azy io. Io taratasy io anefa no itompoan’ny FAT teny tanteraka miaraka amin’ireo vondrona valo nanao rangopohy teny Ivato ary dradrainy fa hosoniavina rahampitso zoma 16 septambra. Vaky bantsilana omaly, nandritra ny nandraisan’ny ekipa teknikan’ny Troika ireo vondron-kery misy eto amin’ny firenena fa diso ny fanitsiana nataon’ny Dr Salomao satria dia mivaona tanteraka tamin’ny fanapahan-kevitr’ireo filoham-pirenena eo anivon’ny SADC izay nivory tao Sandton Afrika Atsimo ny 12 jona 2011. Fantatra fa ny mpitarika ny delegasion’ity ekipa teknika ity no nampahalala fa dia efa niaiky io fahadisoany io teo anatrehan’ny Troika ingahy Salomao, ary tsapany koa fa niteraka fisavorovoroana teto Madagasikara izany.
Ny loharanom-baovao hafa no milaza fa olon-kafa tao anatin’ny ekipa mpanelanelana nirahina matetika teto Madagasikara no nandrafitra ilay fanitsiana fa dia nanao sonia fotsiny ihany ingahy Salomao, izay midika fa nanaiky. Ny lehibeny izay ny Troika mihitsy ankehitriny no milaza fa diso no nataon’ingahy Sekretera mpanatanteraky ny SADC. Mazava izao ny resaka fa niantehitra tamin’ny hazo boboka ny FAT sy ireo vondrona politika mpanohana azy, miaraka tamin’ny tafika. Ny fanontaniana mipetraka eto dia ny hoe, inona àry izany no fanapahan-kevitra horaisin’ireto farany manoloana izany ? Izy ireo izay nilokaloka imasom-bahoaka sy tamin’ny haino aman-jery fa tsy mahalala afa tsy ny sori-dalana nitondran’i Salomao fanitsiana tamin’ny 17 jona, ary io no hatao sonia. Tsy eken’ny Troika anefa io satria nandika vilana ingahy Salomao, fa ny voarakitra ao dia mody tsy misy fepetra ireto sesitany politika rehetra, anisany ny filoha Marc Ravalomanana. Vaky ambatolampy koa izany izao ny fitaka sy fampisavorovoroana nataon’ny iraka notarihin’ny Dr Leonardo Simao. Raha tokony ho nanarina io hadisoana nataon’i Salomao io izy ireo tamin’ny dia in-droa miantoana nontontosainy teto taorian’io 17 jona 2011 io dia vao mainka nanampy trotraka, ka nampijabaka ny FAT hilaza fa hiroso amin’ny fanaovan-tsonia ny sori-dalana ny zoma 16 septambra 2011, eo anelanelan’ny amin’ny efatra ka hatramin’ny enina ora hariva, araka ny nambaran’i Andry Rajoelina.
Akorontan'ny mpomba ny FATE ny asan'ny TROIKA
Misahotakotaka be ihany ny eny amin'ny "Paon d'Or" eny Ivato eny hatramin'ny tolakandro teo. Hatramin'ny ora anoratana aloha dia tsy mbola mitsahatra ny fivoriana eny an-toerana. Miezaka manao izay ahitana vahaolana amin'ny krizy eto Madagasikara ny iraka manokana nalefan'ny TROIKA tarihin'ny Sekretera Mpanatanteraky ny SADC ny Dr. Thomas Salomao saingy tojo olana izany asa izany noho ny teti-dratsin'ny mpomba ny FATE. Tsara ho fantatra fa efa hatramin'ny fiantombohan'ny fihaonana teny Ivato tamin'ny 14 septambra lasa teo dia efa nanakorontana hatrany ireto mpanonahana an'i TGV ireto.
Androany ary, rehefa tonga eo amin'ny fandravonana ny hevitra nodinihina ny mpizaika rehetra, dia nisy ny fifanipahana ka dia voatery nihazo ny Lapam-panjakana Iavoloha ireo iraky ny SADC nitafa tamin'i TGV. Taorian'izay dia noraisin'ity lehiben'ny mpanongam-panjakana ity ireo vondrona 10 nanao rangom-pohy ny 09 Martsa farany teo. Vita izany dia nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ireto farany ary nanamafy fa tsy maintsy hiroso amin'ny fanaovan-tsonia ny sori-dalana nahitsin'i Salomao izy ireo rahampitso ary tsy hanaiky intsony raha mbola hasiana fanovana ny momba izany taratasy sandoka izany. Eo no mikatso ny toe-draharaha hany ka na ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety tokony hataon'ny Dr. Salomao aza dia nahemotra hatrany ary mety tsy hisy mihitsy. Araky ny vaovao farany moa dia ny Ankolafy Telo sy ny MONIMA no raisin'ireo iraka amin'izao fotoana izao saingy tsy mbola nisy nipika kosa ny dinika hatreto. Raha ny nambaran'ny Sekretera Jeneralin'ny Tiako I Madagsikara Mamy Rakotoarivelo kosa dia tsy hanao sonia amin'ny toeran'ny Filoha RAVALOMANANA Marc izany ny delegasiona fa dia miandry ny fahatongavan'ny Filoham-pirenena ny fanaovan-tsonia.
Tsy hitondra korontana ny fiverenan'ny Filoha RAVALOMANANANA
Andro vitsivitsy mialohan'ny fahatongavan'ireo iraka avy amin'ny TROIKA dia nanao lavareny ny fanambarana mikasika ny tsy fankasitrahana ny fiverenan'ny Filoha RAVALOMANANA sy ny sonia hatao amin'ilay tondrozotra sandoka narafitry ny Dr. Salomao. Na ny minisitry ny fiarovam-pirenena an'ny FATE aza dia nanao fanambarana ary nolazainy tao fa ahiana mety hitondra korontana ny fahatongavan'ny Filoham-pirenena eto an-toerana. Raha jerena anefa ny zava-misy ankehitriny dia toa ny FATE no tena mikorontana na dia mbola tsy tonga aza ny Filoha RAVALOMANANA Marc.
Ny lahateny ifandraisan'ny Filoham-pirenena amin'ny vahoaka dia amerimberenany fa "tsy hamaly faty no ahatongavako eto an-tanindrazana fa hitondra fampandrosoana ho an'ny Malagasy tsy an-kanavaka". Ny tena mampanahy ireo olom-bitsy mibodo izao fahefana tsy ara-dalàna izao manko dia ny valifatin'ny Filoham-pirenena. Tokony ho fantatry ny ekipan'i TGV anefa fa tsy toy ny mpitarika azy ireo ny Filoham-pirenena fa olo-manankaja mitana ny teny nomeny ka rehefa miteny izy fa tsy hamaly faty dia tsy hataony izany. Tsy toa ny an'ny sasany sonia atao androany lavina afaka ora vitsy monja.
Telo andro dia miala rehefa tsy hanaiky ny fiverenan'i Dada (+vidéo)
Tapitra ny fiala-nenina tamin'ny FATE. Tsy handefitra intsony ny vahoaka satria efa eo ambavahaonan'ny fahantrana tanteraka noho ny fizirizirian'ny mpanongam-panjakana. Ny antony nisafidianana ny hitolona am-pilaminana hatrizay telo taona latsaka kely izay dia noho ny fanajana ny tenin'ireo Raiamandrenin'ny Ankolafy telo sy ny fankatoavana ny ezaka ataon'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena hamahana ny olana eto Madagasikara. Tsy ny hery famoretana vitsy an'isa mbola mandray volabe amin'ny mpanjanaka akory no hampihemotra ny vahoaka rehefa hihetsika izy saingy ny fotoana hahatongavan'izany no tsy mbola tonga satria mbola niala nenina hatrany ny Malagasy tamin'ny ditran'i TGV sy ny forongony.
Neritreretina fa "adalan'ny tena" mantsy izy ireo ka mbola "notafian-damba". Aorian'izao dinika farany tarihin'ny TROIKA izao kosa dia tsy afaka hilefitra intsony ny maro an'isa raha mbola manohy ny hadalany ny FATE. Raha mbola sahy miziriziry tsy hampody ny Filoha RAVALOMANANA Marc izy ireo dia hanisa telo andro manomboka eo ny vahoaka ary tsy maintsy afaka amin'ny fangejan'ny Frantsay amin'ny endriny vaovao ny mpiray tanindrazana rehetra.
Mitsipaka ny fiverenan-dRavalo Tsy ny Foloalindahy akory fa ny olona roa eo aminy !
Olona roa fa tsy Foloalindahy ! Izay no azo ilazana ny tatitra nataon’ny komandin’ny zandarimariam-pirenena sy ny minisitry ny filaminana anatiny.
Nanazava an-kolaka izy ireo tao anatin’ny tatitra izay nomeny ny solontenan’ny SADC izay tonga omaly, fa tsy tokony hiditra eto aloha ny Filoha Ravalomanana. Nifandraika tamin’ny fanambarana efa nataon’izy ireo tetsy Ampahibe afak’omaly ihany io tatitra io. Amin’ny anaran’izy ireo manokana no nentiny fa tsy amin’ny anaran’ny Foloalindahy akory. Hita ao ihany ny anaran’ny Cemgam, saingy tsy misy soniany akory. Mipetraka avy hatrany ny fanontaniana hoe efa nisy fiaraha-midinika tamin’ny olona feheziny ve izao tatitra natao izao sa kosa dia natao fotsiny amin’izay lalan-tsaina nety tamin’izy ireo ? Ankoatra izay, toa lalaovina ny anaran’ny Foloalindahy satria izy ireo dia manana andraikitra ambony avokoa amin’ny sehatry ny fitandroana ny filaminana. Midika izany fa raha manao io tatitra io izy ireo dia toy ny tatitry ny foloalindahy ihany no hiheveran’ireo mpanelanelan’ny SADC azy. Tsy mahasolo tena velively ny foloalindahy anefa ireo olona roa nanasonia ireo…
Manandafy Rakotonirina Tapi-dalan-kaleha ny FAT
Omaly maraina dia mbola nitohy ny fihaonan’ireo ankolafy politika tamin’ireo delegasiona avy amin’ny Troika. Noraisin’ity farany tsirairay ireo ankolafy ka ny maraina dia ny fiarahamonim-pirenena nahitana ny Cnosc, ny Raimandreny Mijoro sy ny hafa, ireo sokajiana fa hery afovoany toy ny antoko Maitso, ny PSRI ary ireo Ankolafy telo no nidinika tsirairay tamin’ireo delegasion’ny Troika. Hitohy amin’ity maraina ity moa ny fihaonana ka hifampidinika amin’ireo ankolafy politika eto amintsika ny minisitra avy amin’ny Troika. Manana ny fomba fijeriny amin’ny toe-draharaha ankehitriny ny filoha nasionalin’ny antoko Mfm, Manandafy Rakotonirina, izay ao anatin’ny ankolafy Ravalomanana.
Tia tanindrazana (TT) : Ahoana ny fipetraky ny toe-draharaha ankapobeny ?
Manandafy Rakotonirina (MR) :Taorian’ny dinika teny Vontovorona dia nipatitaka tanteraka ary dia ireny niafara tamina totohondry ampahibemaso nataon’ny mpanara-dia an’i Andry Rajoelina ireny. Tsy misy firaisankina sy fifandrindran-kevitra intsony ny manodidina an’i Andry Rajoelina. Ireny niaraha-nahita ireny fa dia mifanipaka izy ireo. Rava ilay hoe Andry mahazaka antoko politika maro, amin’izao aza lasa misy izany hoe Hery afovoany izany indray. Vaky tanteraka ny manodidina ny politikan’i Andry Rajoelina izay karazan’ny nanomezan’i Simao sy Chataigner rariny azy teo aloha.
TT : Aiza ho aiza izany izao ny dingana famahana ny krizy ?
MR : Raha ny zava-misy hatreto aloha dia nohamafisin’ireo delegasiona avy amin’ny Troika fa ny fehin-kevitra tapak’ireo filoham-panjakana tany Sandton no izy fa tsy izay nataon’i Simao na Salomao. Ao amin’ny andininy faha-20 amin’ilay fehin-kevitra dia mazava fa mitaky ny fiverenan’ireo sesitany politika rehetra an-tanindrazana, tsy misy fepetra, ao anatin’izany ny filoha Ravalomanana. Araka izany dia tapi-dalan-kaleha ny FAT sy ireo mpanara-dia azy. Andaniny, miara-mahita ny rehetra fa tsy hisy ny fankatoavana iraisam-pirenena raha tsy ao ny Ankolafy telo. Vokany, nisy ny fihaonan’ireo mpanao sonia ny Dina Repoblikanina tamin’ny Ankolafy telo in-droa niantoana ka nisy fanambarana nivoaka tamin’izany. Niraisan’ireo mpivory hevitra, ohatra, ny fodian’ny filoha Ravalomanana. Nisy anefa ny tsindry ara-bola sy toerana ka dia iny niala iny ny MDM tarihin’i Pierrot Rajaonarivelo. Ambaran’ireo mpanohana an’i Andry Rajoelina koa andaniny fa dia ny tondrozotran’i Simao ihany no hasiana rangopohy amin’ny zoma. Mifanohitra tanteraka amin’ny itondran’ny SADC sy ny Troika ny famahana ny krizy eto amintsika izany.
TT : Inona izany no mety ho tohin’ny raharaha ?
MR : Lojikan’ny zava-misy amin’izao fotoana izao ny fanonganana an’i Andry Rajoelina. Tsy nisy nahomby avokoa izay nataony rehetra nanomboka tany amin’ny hoe : Dinika Santatra, Fihaonambem-pirenena, fitsapan-kevi-bahoaka momba ny lalàmpanorenana, tondrozotra. Raha ny fanazavana dia rava daholo ireny raha toa ka ekena ilay tondrozotra nasiam-panitsiana.
TT : Raha izay, inona no kisary mety hiseho ?
MR : Tsy tena fantatro izay ho fanapahan-kevitry ny SADC ankoatra ny filazany hoe ny fehin-kevitr’i Sandton ihany no izy. Soso-kevitro kosa ho an’ny tetezamita dia sarahina ny atao hoe “Etat” sy ny hoe ”Nation”. Ny “Nation” dia ahitana ireo filoham-pirenena lanim-bahoaka rehetra toa an-dRatsiraka, Zafy Albert, Ravalomanana ary Rajoelina izay nofidin’Antananarivo ho Ben’ny tanàna. Mety tamina fotoana samihafa no nahalany ireo olona ireo saingy voafidim-bahoaka izy ireo. Ny Praiminisitra, ireo parlemantera kosa no ao anatin’ny “Etat”. Avy ao amin’ireo parlemantera no hakana ny Praiminisitra izay hanendry ireo mpiasam-panjakana ambony rehetra. Ireo mpikambana ao amin’ny “Nation” no hiaraka hanendry ireo ho mpikambana eo anivon’ny Kongresy sy ny Filankevitra ambonin’ny tetezamita ary avy ao no hakana izay ho Praiminisitra. Tetezamita mizotra ho an’ny demokrasia io hatsangana io.